Global Voices teny Malagasy » Manao Blaogy Mikasika Ny Herisetra Tao Etiopia i Andrew Heavens · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Septambra 2018 13:21 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Herinandro vitsivitsy lasa izay, sahala amin'ny toa fandresena goavana ho an'ireo mpomba ny fisokafana sy ny fanapariahana ny demokrasia ireo fifidianana tao Etiopia. Tamin'ny alàlan'ny fitaterana ny toa fitomboan'ny seza azon'ny mpanohitra, toerana 12 hatramin'ny 174, ao amin'ny parlemanta izay ahitana toerana 547, nanoratra i Abraham McLaughlin  tao anatin'ny Christian Science Monitor manao hoe:
.Tena tao anatin'ny zavanitranga mihitsy i Andrew Heavens, mpanao gazety iray tsy miankina avy ao Addis-Abeba, ary naka sary ho an'ny Reuters. Ny blaoginy, Meskel Square , ankehitriny dia feno ireo tantara sy sary mampangirifiry .
Navoakan'i Andrew teo amin'ny Flickr ireo sary . Ahitana ny sarin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana teny andalam-be  izy ireny, ireo tanora mitàna vato  ary be loatra ireo sarin'ireo naratra sy ireo maty .
Manontany tena ny tontolombolongana Etiopiana raha toa ka mirona mankany amin'ny revolisiôna miendrika Okraniana  i Etiopia. Ireo blaogera avy amin'ny mpanohitra no tena heno manokana. Manana lahatsoratra lavabe  i Ethiopundit manao resaka tsy loabody hoe halatra ireo fifidianana sy tamin'ny filazàna hoe ny nahazoan'ny mpanohitra ireo toerana tao Addis-Abeba, dia rahona manakona entina hanaronana ny hala-pifidianana ankapobeny. Manome tombony ny fanadihadiana antontanisa i Dagmawi, ao anatin'izany ireo vinavina  izay nilaza fa nanome tombony ny antoko eo amin'ny fitondrana ilay taham-pandraisana anjara ary milaza hosoka.
Mino ny Ethiopian Review  fa ny mpitondra tenin'ny CUD (antokon'ny mpanohitra), Ato Lidetu Ayalew, dia notazonin'ny governemanta tsy misakafo sy tsy misotro rano ka angatahany ny olona mba hiantso ny CICR hiangavy fanampiana hahazoana ny famotsorana azy.
Sahala amin'ny toa poretin'ny governemanta Etiopiana ny mpilaza vaovao tsy miankina, amin'ny alalan'ny fisintonana ireo fahazoandalana hilaza vaovao tamin'ny Deutchse Welle sy ny Voice of America . Mangataka an'ireo mpaneho hevitra eo amin'ny blaoginy i Heavens mba hanohy “hampitonitony ireo fanehoankevitra”, no sady tonga saina fa tandindonin-doza ihany koa ny fisiany ao Addis Abeba .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/11/125922/
 nanoratra i Abraham McLaughlin: http://www.csmonitor.com/2005/0531/p07s01-woaf.html
 Meskel Square: http://www.meskelsquare.com
 ireo tantara sy sary mampangirifiry: http://www.meskelsquare.com/archives/2005/06/day_three.html
 mpianatra nanao fihetsiketsehana teny andalam-be: http://www.flickr.com/photos/andrewheavens/17969666/
 tanora mitàna vato: http://www.flickr.com/photos/andrewheavens/18158700/
 sarin'ireo naratra sy ireo maty: http://www.flickr.com/photos/andrewheavens/18158141/
 revolisiôna miendrika Okraniana: http://ethiopundit.blogspot.com/2005/06/common-sense.html
 lahatsoratra lavabe: http://ethiopundit.blogspot.com/2005/06/we-dont-need-no-votes.html
 Ethiopian Review: http://ethiopianreview.homestead.com/
 amin'ny alalan'ny fisintonana ireo fahazoandalana hilaza vaovao tamin'ny Deutchse Welle sy ny Voice of America: http://www.voanews.com/english/2005-06-08-voa57.cfm
 mpanangom-baovao ato amin'ny Global Voices : http://www.bloglines.com/public/globalvoicesonline